दिल्लीले हारको कारण पत्ता लगायो, अबको खेलमा सन्दीप नभै नहुने यस्तो निष्कर्ष – PathivaraOnline
Home > समाचार > दिल्लीले हारको कारण पत्ता लगायो, अबको खेलमा सन्दीप नभै नहुने यस्तो निष्कर्ष
काठमाडौं, ५ वैशाख । सोमवारको खेलमा कोलकतासंग हार बेहारेरे पछि दिल्लीले समिक्षा गरेको छ । उक्त हारपछि दिल्ली अब खेलमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने रायमा पुगेको छ । उसको आधिकारिक वेव पोर्टल (दिल्ली डेयर डेभिल्स डट कम) मा नै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । दिल्लीले कोलकातासंग हार बेहोर्नुको पांच कारण पत्ता लगाएको छ । जसलाई उसले आफ्नो आधिकारीक साइटमा पनि सार्वजनिक गरेको छ
१. राम्रो सुरुवातका बाबजुद खेल गुमाउनु
२. ट्रेन्ट बोल्टबाहेक सबै फ्लप
३. आन्द्रे रसेलको १२ बलमा ६ छक्का
४. दिल्लीका ९ ब्याट्सम्यानले दोहोरो स्कोर छुन नसक्नु ।
५. केकेआरका स्पिनरको जालमा परे ब्याट्सम्यान
एकातर्फ दिल्लीका स्पिनर खेलमा रन लुटाइरहँदा अर्कातर्फ कोलकाताका तीन स्पिनरले ७ ओभर २ बलमा ६६ रन दिएर ७ ब्याट्सम्यानलाई पेभिलियन पठाएका थिए। दुईतर्फका बलरहरूमा यति ठूलो अन्तर दिल्लीलाई हैरान बनाउन पर्याप्त रह्यो। यो सिजनमा हरेक टिमसँग राम्रा स्पिनरहरू छन्। यसको फाइदा मैदानमा उठाइरहेको पनि देखिन्छ। आशा गरौँ, आउने खेलमा दिल्लीले पनि आफ्ना अनुभवी स्पिनर अमीत मिश्राको साथमा नेपालका सेन वार्न सन्दीप लामिछानेलाई पनि मौका दिनेछ।
इण्डियन प्रिमियर लिग ९आईपीएल० मा दिल्ली डेयर डेभिल्स कोलकाता नाइट नाइडर्ससँग ७१ रनले पराजित भयो ।खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै दिल्लीका ग्लेन म्याक्सवेलले आफूहरुको बलिङ कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रो बलिङ लाइन मिसमास भयो, हामीले एउटै लयमा मिलाएर बलिङ गर्नै सकेनौँ’ म्याक्सवेलले भने, ‘उनीहरुले बिचको ओभरमा धेरै रन बनाए । हामीले सोचेर बलिङ गर्न सकेनौँ ।’
अन्तिम ओभरमा तीन विकेट लिएर १ रन मात्र दिएको दिल्लीको मध्य क्रममा बलिङ खराब रहृयो । उनीहरुले बिचको १८ ओभरमा १९९ रन खाए । २०१ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीका लागि म्याक्सवेलले २२ बलमा ४७ रन बनाएका थिए । यस्तै रिसब पन्तले २६ बलमा ४३ रन
अन्यले खुलेर खेल्न सकेनन् । कोलकाताका स्पिन बलरहरु चलेको खेलमा दिल्लीले मध्यक्रममा तीब्र गतिका बलर लगातार खेलायो । कोलकाताका आक्रामक ब्याटिङ गरिरहेका एन्द्रे रसेलले तीब्र गतिको बलमा रन बनाइरहेका थिए । उनले १२ बलमै ६ छक्कासहित ४१ रन बनाए । उनको धेरै रन तीब्र गतिका बलर मोहम्मद सामीविरुद्ध आयो ।
कोलकाताले १४ ओभर २ बलमा दिल्लीलाई १२९ रनमा अल आउट गर्दा स्पिनरहरु चलेका थिए । ‘हामीले हाम्रो बलिङमा छिटै बिचार गर्नुपर्ने देखिएको छ’ दिल्लीका सहायक प्रशिक्षक श्रीधरन श्रीरामले भने, ‘पञ्जावका राहुलले धुरन्धर हाने, राजस्थानसँग हामी ठीकै थियौँ । तर, कोलकातासँग त धेरै नै कमजोर देखियो ।’ उनले आफ्ना तीव्र गतिका बलरले केही भिन्न सोचेर आउनुपर्ने बताएका छन् ।
ज्यासन रोय, ग्लेन म्याक्सवेल, क्रिस मोरिस, टे्रन्ट बोल्ट, कोलिन मुन्रो, ड्यानियस क्रिष्टियन, एल्बी मोर्केल, कागिसो रबाडाजस्ता विदेशी खेलाडी भएको टिममा विदेशी खेलाडी भएकैले प्लेइङ ११ मा पर्न सन्दिपलाई कठीन छ । यसको अर्को कारण दिल्ली टिममा अमित मिश्रा, साहब नदिम, राहुल तेवाटिया, अभिषेक शर्मा, अखिल हेरवाडकर, महिपाल लोमरर घरेलु स्पिनर छन् ।